Wadada Tareenka ee Erzincan Trabzon waxaa loo furi karaa adduunka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonWadada Tareenka ee Erzincan Trabzon waxaa adduunka looga furi karaa adduunka
26 / 11 / 2019 61 Trabzon, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY
Professor Dr. Atakan Aksoy wuxuu yidhi, “Waxaa jira dariiqooyin loo maro jidka tareenka Erzincan Trabzon. Waxa kale oo jira habab loo maro wadada tareenka. Gaadiidka badda ayaa u baahan xoojin. Laba mashruuc oo gobolka ka socda waa in isku mar la bilaabaa ”
Mid ka mid ah mowduucyadii looga hadlay sanadihii dhowaa gobolka Bariga Black Sea waa jidka tareenka. Tallaabooyinka lagu qaaday wadada ay dadka deegaanku aad u danaynayeen waa la hayey ama looga tegay si ay u gurguurayaan. Mid ka mid ah kuwa diirada saaraya mowduucan waa Professor. Dr. Muuqaal buuxa ka daawo Atakan Aksoy, oo fuliya daraasado muhiim ah qeybta tareenka, ayaa ka mid ah kuwa tirada yar ee ku habboon kara toban qumbe oo kursi ah. Furay a qaansada ku gaar ah fikrado kala duwan ka soo baxaysaa gobolka si ay badda bari Black in ay tareenka Turkey Aksoy aha aragtida noqon lahaa celinta weyn. Aksoy, mawduuca abuurista polyphony Wargayska Karadeniz Tafaftiraha madaxa Furkan Yiğit'ın jawaabaha waa in lagu soo sawiro lix qodob oo geesinimo leh.
Waxaan dooneynay inaad fikir ka dhiibtaan fikradahaaga ballaaran ee ku saabsan jidka tareenka ee Erzincan, kaas oo si joogto ah loogu dhawaaqi jiray Trabzon sannadihii la soo dhaafay oo xitaa wuxuu abuuraa fikirro is-afgarad iyo kuwa ka soo horjeedka arrintan.
Mashruuc caalami ah
Wadada Tareenka waa mashruuc adduunka marka laga hadlayo faa'iidooyinka iyo is-dhexgalka ay gobolka iyo waddankeenna iyo sidoo kale khadadka tareenka u abuuri doonaan cabbir adduunka ah. Dabcan, khadka tareenka Erzincan waa lahadlaa, khadka tareenka Samsun-Sarp waa lahadlaa. Si kastaba ha noqotee, kuwani waa xariiqyo gooni ah oo leh dhibco bilow iyo dhamaad leh. Waa khadadka abuuri doona habab faa'iidooyin kala duwan. Waa in si deg deg ah loo ogaadaa in mashaariicda tareenka ay ku dhaceen maalgashi. Waxay ku saleysan tahay daraasadaha suurta galka ah ee ballaaran. Hadana maahan arin gaadiid oo go'aan laga gaari karo gebi ahaanba. La qiimeeyo heerka sare, taas oo lala xiriirin karo siyaasadda ammaanka, waa ka baxsan waaxda gaadiidka ee gobolka, taas oo go'aan ka warshadda macdan qodista dhammaan dhinacyada arrimaha galay daraasad gaadiidka dhamaystiran qiimeeyo ee macnaha guud ee qorshaha logistics Turkey ee jira arrimo aad u adag in ku salaysan yihiin qorshaha.
Isbarbar dhigga LABAAD OO LACAG LA'AAN AH
Injineerrada tareenka ayaa ka soo saaraya cabirro aad u adag. Sidoo kale sax maaha in la isbarbar dhigo labada xariiq halkan. Sida guud ahaan, waxaa mudan in la xuso in marka aan kahadalno gaadiidka, ay jiraan howlo qiimeyn ah oo soo ifbaxaya hal mar. Waa maxay howlaha qiimaha? Waxaad rar ka qaadi doontaa hal meel ilaa mid kale. Waxaa jira gaadiid waddo, gaadiid tareen, gaadiid badeed. Jawiga ay ku jiraan dariiqooyinka kale ee seddexda nooc oo gaadiid, haddii aad u maleyneyso midka dhaqaale ahaan u raacaya rarkan, dabcan waxaad dooranaysaa habka ugu dhaqaale ee gaadiidka. Masaafada gaadiidku waa shaqo muhiim ah halkan. Taasi waa, masaafada laga soo bilaabo barta A ilaa dhibicda B ee dacwada laga qaado asal ahaan waa shaqo go aan qaadata.
MADAXWEYNE FARSAMO MADAXWEYNE
Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in gaadiidka wadooyinka guud ahaan ay ka hufan yihiin rarida xamuulka ilaa xNUMX-400 kiiloomitir, gaadiidka xadiidka ayaa ah mid dhaqaale ahaan ka badan inta udhaxeysa 500 km iyo 400 km, iyo gaadiidka bada waa mid faaiido iyo faa iido badan leh masaafada masaafada dheer marka loo eego 1500 km. Markii hore, kuwaas oo arrimo Turkey ayaa isku diyaarinaya logistics qorshaha, aan ku soo biiray, waxaan soo bandhigay darsaday in habkan. Dabcan, waxbarashada, kuwaas oo la fuliyaa for Turkey. Faasaskii woqooyi-koonfur ayaa lagu xoojinayaa dhammaan gobollada Gobolka Bari Badda Madoow. Gaar ahaan marada dheer. Iyada oo la xoojinayo dhidibada-woqooyi-koonfur waxaan ula jeedaa yareynta qulqulka, masaafada gaabinaysa, yareynta isticmaalka shidaalka, gaar ahaan gawaarida xamuulka, iyo xaalado dhaqaale oo dheeri ah. Sidaa darteed, tan 1500-400 kiiloomitir waqooyi kaga Badda Madow ee Turkey waa in aan this qaadan sidii salka loo arkay agagaarka badda Mediterranean ee koonfurta of link xira gaadiidka wadada waa in dhaqaale ahaan loo isticmaalo.
Dabcan, marka ay timaado jidadka tareenka, masaafada fog ee masaafadan, tusaale ahaan 1500 km, maskaxda ku soo dhig, taas oo macnaheedu yahay in wadada tareenka ee Erzincan-Trabzon ay faa'iido weyn yeelan doonto. Wadada tareenka ee Samsun Sarp waxay sidoo kale abuuri doontaa faa iidooyin badan xeebta dhexdeeda. Kuwaani waa cunsurro is-dhammaystir ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaqiiqooyin mashruuc ah, waa lagama maarmaan in la xuso. Dabcan, jid tareenka ka gudba xeebta Trabzon wuxuu sidoo kale gacan ka geysan doonaa horumarinta bartamaha magaalada iyo degmooyinka. Labadan wado waxay muhiim u yihiin gobolka iyo dalka. Waxaan jeclaan lahaa in aan ku nuuxnuuxsado in maalgalinta wadooyinka tareenka aysan ahayn kaliya wajiyo lagu hor mari karo caqliga saynisyahanada gaadiidka iyo qaababka guud. Tan waxaa ku jira qorshe istaraatiijiyadeed, oo yaanan iloowin in siyaasadaha amniga qaran ee dalka iyo saadaalinta mustaqbalku ay qayb muhiim ah ka yihiin.
Waxaan jeclaan lahaa inaan tilmaamo inaysan sax ahayn in la soo bandhigo qaababkan sida tareenka ama tareenka. Arintaan, sida aan sheegay, waa arinta ay go’aamin doonaan maaraynta xirfadleyda qorshayaasha saadka, hababka go’aanka qaran, qorshayaasha istiraatiijiyadeed, qaababka amni iyo awoodaha horumarineed guud ahaan. In yar, Xeebta Samsun, Samsun-Trabzon-Batumi wadada xeebta waxay leedahay faa iidooyin muhiim ah marka loo eego suurta galnimada. Si midba midka kale ugafilaabo, bilowga labada mashruuc si wada jir ah ayaa waliba loo cadeyn karaa. Kuwani waa in sidoo kale la baaraa. Maaddaama tareenka xeebeedku u dhex mari doono marinnada illaa xad aad u weyn, wuxuu lahaan doonaa faa iidooyin badan oo la-wareegid ah waxayna ku mari doontaa qaab soo saari doona qaab-dhismeedka injineernimada, kaabayaasha, qaab dhismeedka balaca iyo waxyaabo kale, waxaana jira sababo lagu maalgeliyo nafsadda qalabka qalabka. Sidaan idhi, maalgashigan wadooyinka tareenka ayaa ah cunsurro is haysta.
Turkey waxa ay qaadanaysaa guuro dheeraad ah si loo xoojiyo dhaqaalaha. Republic of Turkey siinayaa mudnaanta arrimaha istaraatiijiga ah ee kala duwan. Muxuu sidan u samaynayaa? Sababtoo ah alaabo kala duwan oo istiraatiijiyadeed ayaa safka hore u jira si ay u bixiyaan awood sare oo tayo sare leh, si loo kordhiyo heerka horumarka, si loo xalliyo dhibaatooyinka iyadoo loo weecinayo wax soosaarka dhibaatooyinka dhaqaale iyo in la xoojiyo dhaqaalaha. Dabcan, gaadiidku waa arin muhiim ah. Waa inaan maalgashi badan ku samayno gaadiid ka yimaada wadamada horumaray. Sidii aan idhi, labada tareen ee muhiimka u ah gobolkan, runtii waxay bixin doonaan faa'iidooyin gooni ah. Midba midka kale wuu kaabaa. Isbarbar dhigga jidadyadan, ugu horreyntii, waa in diiradda lagu saaraa farsamooyinka waxtarka halkii ay tan ka ahaan lahayd. Dhab ahaantii, aan hab, dhibic ka mid ah horumarinta xarumaha gaadiidka badda ee gobolka qiimeyn oo dhan sababo la heli karo, koonfurta dhibic waqooyi-xoojinta dhidibka jid oo la guuro gaadiidka ka sameeyey dalka Turkiga, gaar ahaan aagga of labo line, kuwaas oo is-maalgelinta in guryaha iyo bilowga wada sabab u ah ku guuleysan kara horumarka degdeg ah marka loo eego waxaa la muujin doonaa Waxaan u maleynayaa inay faa iido weyn u tahay. Mashaariicdani waxay leeyihiin sababo kala duwan laftooda. Dood-wadaag ama shirar ayaa laga abaabuli karaa gobolka.
Mudane Aksoy, ma jiraa talaabo rasmi ah oo arrintan la xiriirta?
Daraasado muhiim ah ayaa laga sameeyay gobolka wadada weyn. Laakiin arrinta muhiimka u ah Trabzon waa Wadada 'South ring Road'. Sida khadka tareenka leeyahay faa iidooyin, khadka wadada ayaa leh faa iidooyin. Waxaa jira qaabab loo maro jidka tareenka ee Erzincan-Trabzon. Waxa kale oo jira habab loo maro wadada tareenka. Wasaaradda Gaadiidka waxay u baahan tahay inay arrimahan wax ka qabato sidii arrimo istiraatiiji ah. Qaabku wuxuu ahaan doonaa mid rasmi ah oo wuxuu noqon karaa mid marin habaabin ah maxaa yeelay waa inuu noqdaa mid isla markiiba ama mid kale. Laakiin waxaan ubaahanahay inaan ka fikirno guud ahaanba. Dalku wuxuu u baahan yahay maal gashi. Gaadiidka badda ayaa u baahan xoojin. Turkey waxa ay isku diyaarineysaa qorshe logistics sayidkii. Laba mashruuc oo gobolka ka socda waa in isku mar la bilaabaa.
TUNNELS WUXUU YIIRI doonaa NATIIJADA SANADKA NATIIJADA
Tani waa faahfaahin aad u muhiim ah. Qofna weligiis ma dhihin taas. Markaa furitaanka isku mar.
Dabcan Erzincan waa mid aad u sarreeya. Waxaad ka galaysaa koodhadh aad u sarreeya kanaad lambarrada hoose. Wadooyinka tareenka waa la dheereeyey sababtuna waa yar yar ee jidadka tareenka iyo dusha sare ee koodhka. Wadooyinkan tareenka ee la dheereeyey ayaa ka gudbaya dhismayaal dhul badan oo dabcan horumariyo gobollo badan. Si kastaba ha noqotee, wadada tareenka ee xeebta guud ahaan waxay lahaan doontaa isla lambaro, iyada oo tuneladu ay yihiin dhagxaan dabiici ah oo qaas ah, gaar ahaan awoodda ay leedahay in tuneladu u abuuraan waxyaabo ay soo bandhigi karaan gobollada ay dhaafi karaan. Agabyadan ayaa loo jabin karaa loona isticmaali karaa wax soo saar la taaban karo iyo isku darka wax soo saarka. Sidaa darteed, kuwani waa mashaariic is maalgelin kara. Maal gashiga gaadiidka ayaa midba midka kale u baahan yahay. Waa sida xididdada jidhka bini-aadamka. Wadooyinka, jidadka tareenka, maraakiibta, marinnada hawada… kuwanu waa qaabab abuuraya hababka faa'idooyinka kaladuwan iyo taageerada iyo is-waafajinta midba midka kale. Sawir la mid ah ayaa soo baxay marka loo eego baaxadda jidadka tareenka ee Yurub iyadoo ay ugu wacan tahay wareegga dhaqaale ee waddanka oo ah halka ugu hooseeya horumarka iyo galbeedka. Dabcan, Turkey u kala bixin doonaa waddooyinka tareenka galbeed bari. Khadadka tareenka waa sidaan horeyba u idhi, waa dhameystir waana in si wada jir ah loogu bilaabaa sababaha dhismaha dhaqaalaha. Arimaha is maalgelinta.
INTERACTION waa mid aad muhiim u ah
Wadada tareenka runti maahan maalgashi keenaya qiimo weyn dalka.
Aad u run ah. Wadada tareenka ma u keeno culeys weyn dalka, laakiin waxay ku bixin doontaa faa iido weyn xagga horumarka. Kuwani waa Xerada Cankurtaran ee Artvin, Ovit Tunnel ee Rize, Tunig Zigana ee Trabzon, Tunre Deregeçidi ee Giresun, tunelada kale ee Ordu, oo ay weheliyaan tunelada dhaadheer, yaraynta kuwan XkmX kiloomitir ee jidadka laamiga ah, dhimista masaafada iyo yareynta qarashyada wadada. Halkaa markan ayaa laga danaynayay. Maalgashiyo muhiim ah ayaa laga sameeyay halkan. Haddii aan soo qaadno isugeyn ku dhawaad ​​xNUMX kilomitir u jirta gobolka, iskuxirka gaadiidka waddooyinka ee gobolka ayaa loo xoojiyay qaab dhaqaale. Is dhexgalka Trabzon-Gümüşhane waa mid aad muhiim u ah markii la fulinayo. Trabzon-Erzurum, Trabzon-Artvin, Isdhexgalka Trabzon-Samsun waa mid aad muhiim u ah.
Shaxdan ku xirnaa waxaan u aragnaa 'South ring Road' inay muhiim u tahay faa'iidooyinka tareenka. Si kastaba ha noqotee, waxay si gaar ah faa'iido u leedahay marka loo eego awoodda lagu quudiyo dekedaha illaa xNUMX kiiloomitir, maadaama ay ku lug yeelan doonto gaadiid masaafo dheeri ah oo tareen ah. Laakiin mar labaad, kani waa arin istiraatiiji ah. Awoodda ay u leeyihiin mashaariicahan, oo isbarbar dhiga midba midka kale iskaashi macquul ah, gaar ahaan awoodda is-maalgelinta ee tareenka xeebta iyo awoodda koritaanka ee mashruuca kale, ayaa aad muhiim ugu ah abuuritaanka tallaabo horumarineed oo isku mid ah. Arrintaani waxay u baahan tahay in laga soo jeediyo aragti xirfadle. Wadada tareenka waa cinwaan gooni ah oo ka dhexeeya maalgashiga gadiidka ee adag. Waa maaddo u baahan in si xoog leh xirfadda loogu jeediyo.
RASALKA AQOONSIGA EE DIIWAANKA
Dadku waxay u malaynayaan inay daahay maalgashiga tareenka. Goorma ayuu dhamaanayaa qorshaha istiraatiijiyadeed?
Waxaan lagu qaban doonaa sanadka 5 soo socda ee mashruucan inta lagu guda jiro, waa in la bilaabay on dhismaha Rize iyo Giresun ku xiran baahida loo qabo jidka weyn khadadka Tareenada aan mar dambe la lahaa more culus ka wada hadleen oo ku iman kara macdanta halis gaar ahaan gobollada la mid noqoshada daraasaddan hadda waxaan sii dhawaanayaa marayso marka la eego xaqiiqada ah gaar ahaan dalka Turkiga in waxaan qabaa. Waxaan rumeysanahay inay tahay geeddi-socod u dhow qaababka go'aannada ee la xiriira si loo gaaro go'aanka saxda ah.
Ma dhihi karnaa in macdanta gobolka ay sidoo kale ku horumarin doonto mashruuca tareenka?
Sure Waxaa jira xaqiiq jirta, gaar ahaan gobolkan. Basalt waxay leedahay adeegsiyo badan oo kaladuwan. Tusaale ahaan, waxaa loo isticmaalaa sida fiber. Mar labaad waa maaddo bacrimin ah oo dabiici ah. Waxay leedahay qiime warshadeed oo sareeya. Gaar ahaan warshadaha gawaarida, warshadaha dhismaha, wadooyinka waaweyn, dekedaha ayaa ah adeegyo aad u culus. Iyo Badda Madoow waa gobol ay kujiraan tirada adduunka ee kaydka marka loo eego nolosha basalt. Turkey waa arrin in sidoo kale ka geysan karaan horumarka degdeg ah.
TCK 16-ka Degmo Refahiye - Kala soocida Erzincan - Gumushane - Gobolka Xuduudaha Gobolka Erzincan…
Jooji gaadiidka! Duufaan Buun-buun ayaa lagu burburin karaa wakhti kasta
Istanbul, Halic Metro Subpass Burburin liiska Dhaxalka Aduunka
3. Bixinta Sukuk waxaa diyaar u ah garoonka diyaaradaha iyo maalgelinta Kanal Istanbul
Tareenka YHT ee Ankara-Istanbul ayaa la furi karaa bisha Febraayo
Wax kasta oo la samayn karo ayaa lagu sameyn karaa Xarunta Tareenka ee Haydarpasa
Qadka tareenka xawaaraha sare ee Moscow-Kazan ayaa loo kordhin karaa Beijing
Wixii dheeraad ah oo lagu noolaan karo waxaan Turkey Hitachi ee Social Innovation Forum 's a gaarsiisan
Gobolka Bari ee Badda
Wasakhaynta Hawada hawada ee Waddooyinka Magaalada Istanbul ee hoos timaad Qiimayaasha Xuduudaha